ọgụgụ isi - Ọzụzụ ọgụgụ isi
Tag Archives maka: "ọgụgụ isi"
Here nọ ebe a: Home » ọgụgụ isi
ADHD na IQ. Akụkụ ndị metụtara arụmọrụ ụlọ akwụkwọ
Etule nsonaazụ nke mahadum na ule nyocha
Ọgụgụ isi, nlebara anya na arụmọrụ agụmakwụkwọ. Kedu ihe dị mkpa n'ezie?
Ọzụzụ na-arụ ọrụ na ebe nchekwa iji mee ka ọgụgụ isi. Ọ na-arụ ọrụ n'ezie?